Ihe nkiri China Bundling, kechie ngwa agha, agbachi mkpocha aka onye na-ebunye ya
Polythene Ibé akwụkwọ
Bopp Mezie Jumbo apụta
Nkọwa:Ngwongwo Bundling,kechie ofe,aka nkpa,aka mpịakọta ihe nkiri,,
Akwụkwọ eji agba agba agba
Ugboro abụọ Sided Tape
Ihe Nkiri Nweta Stgbọ mmiri
Aka nkpisi aka Nkiri
Nkiri Akara Ejiri
Ihe nkiri Bundling
Jumbo Stretch fim
Polythene Ibé akwụkwọ
Air Car Mpempe akwụkwọ
Plastic dobe Ckwà
Akpa Mgbapu ekeresimesi ekeresimesi
 HomeNgwaahịaIhe NkiriIhe nkiri Bundling
Polythene Ibé akwụkwọ
Ihe nkiri Bundling (Total 50 Products)
Ngwaahịa nke Ihe nkiri Bundling , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ngwongwo Bundling , kechie ofe suppliers / factory, wholesale high-quality products of aka nkpa R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Baby Roll Mini ịgbatị Nkiri
Mini Hand Stretch Kechie
Ihe nkiri nke mechiri akpa
Iji aka na-etinye ihe nnabata gbasara ihe eji eme ihe nkiri
Black ejiri aka kee ihe nkiri
18x 1500 akwụkwọ nkpuchi pallet
Mpempe akwụkwọ ejiri aka kee
Jiri aka gbatoo aka
Mpempe mkpuchi ejiri aka mee
Obere gbatịa nke a
Ihe mkpuchi na-enye aka na PE
Ezi mma Obere gbatịa ihe nkiri na aka
Aka iji gbatịa ihe nkiri eji eme ihe nkiri
Omimebe Ihe Nkiri Na-eji Nkọcha Mee Pertch
Ejiri aka na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ
Eserese Ọhụrụ esetịpụtara eji ihe eji agba agba
Ihe mkpuchi na-acha aja aja na-acha uhie uhie eji eme ihe nkiri
Agba iji gbatịa ihe nkiri
Ngwa ahia ohuru k’etinye aka n’isi
Obere ihe nkiri a na-ete anwụ
Inye Ike: 400 tons/months
Baby Roll Mini ịgbatị Nkiri Anyị Baby Roll Mini Stretch Film nwere ụdị abụọ, otu nwere aka ya na nke ọzọ nwere ihe na-agbanwe agbanwe. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị weta aka gị, ọ ga-adaba adaba maka ojiji kwa ụbọchị, n'ihi na enwere...
Mini Hand Stretch Kechie Mgbe ọtụtụ ndị ahịa zụrụ Mini Hand Stretch Wrap, ha na-ajụ ma enwere ike ịhazi agba nke njikwa ahụ. Azịza ya bụ ee. Ihe anyị niile bụ customizable. Agba nke aka nwekwara ike ahaziri dị ka gị chọrọ. Ọ bụrụhaala na ị nyere...
Mbukota Kechie na Aka Mbukota Kechie na Aka Mgbe ọtụtụ ahịa ịzụta anyị mbukota Kechie na emefu, ha na-ajụ ma na agba nke ahụ ike nwere ike ahaziri. Azịza ya bụ ee. Ihe anyị niile bụ customizable. Agba nke aka nwekwara ike ahaziri dị ka gị chọrọ. Ọ...
Ihe nkiri nke mechiri akpa Nkwakọ ngwaahịa Ntanetị Ngwaahịa Mgbe ọtụtụ ndị ahịa zụtara ihe nkiri anyị na-esere anyị maka iwepu akpa, ha na-ajụ ma enwere ike ịhazi agba nke njikwa ahụ. Azịza ya bụ ee. Ihe anyị niile bụ customizable. Agba nke aka...
Eke: Ihe ntanye
Ihe nkwakọ ngwaahịa plastik PE na-etinye ihe mkpuchi Ihe eji emeputa ihe eji eme ihe eji eme ihe. Ikpokoro ihe eji eme ihe n’elu adịghị mfe ịrapara n’apịtị, ahụike dị ọcha. Ihe eji eme ihe eji emeghari ihe kariri 100% n'ime ihe eji emeghari ihe....
Ezigbo mma Obere agbatiri na-emeghe ya Imachi Kechie gbasara ihe nkiri na-apụta uru: Enwere ike iji ya kpuchichaa arịa ụlọ site na akwa, ọgịrịga, ọkọ na unyi. Site na njigide siri ike na nguzogide akwa akwa siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị kechiri...
Ezigbo mma Obere agbatiri na-emeghe ya Imachi Kechie gbasara ihe nkiri na-apụta uru: Enwere ike iji ya kpuchichaa arịa ụlọ na akwa, ọgịrịga, ọkọ na unyi. Site na njigide siri ike na nguzogide akwa akwa siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị kechiri ekechi...
Ezi mma Obere gbatia Kechie na-apụta Imachi Kechie gbasara ihe nkiri na-apụta uru: Enwere ike iji ya kpuchie arịa ụlọ akwa site na nsị, rips, ọkọ, na unyi. Site na njigide siri ike na nguzogide akwa akwa siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị kechiri ekechi...
Ezigbo mma Obere agbatiri na-emeghe ya Obere gbatịa mkpuchi na-apụta uru: Enwere ike iji ya kpuchichaa arịa ụlọ site na akwa, ọgịrịga, ọkọ na unyi. Site na njigide siri ike na nguzogide akwa akwa siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị kechiri ekechi agaghị...
Ezigbo mma Obere agbatiri na-emeghe ya Obere igbachi kechie uru: Enwere ike iji ya kpuchichaa arịa ụlọ site na akwa, ọgịrịga, ọkọ na unyi. Site na njigide siri ike na nguzogide akwa akwa siri ike, ọ na-ahụ na ihe ndị kechiri ekechi agaghị ada ma ọ...
Agba iji gbatịa ihe nkiri Uru: (1) Ngwa anyị niile dị ọcha 100%. Yabụ na anyị ga-ekwe nkwa nke ịdị mma. (2) Ichekwa ego na oge (3) teknụzụ dị elu na akụrụngwa (4) Echiche mara mma maka ichekwa ngwongwo na mmiri, nchara na unyi (5) ihe akụ na ụba nke...
Omimebe Ihe Nkiri Na-eji Agwọ Pinye aka na Nkedo Uru ： (1) Ngwa anyị niile dị ọcha 100%. Yabụ na anyị ga-ekwe nkwa nke ịdị mma. (2) Ichekwa ego na oge (3) teknụzụ dị elu na akụrụngwa (4) Echiche mara mma maka ichekwa ngwongwo na mmiri, nchara na...
Nkwakọ ngwaahịa: Eserese
Ejiri aka na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ Atụmatụ: 1, nnwapụta dị elu, nghọta, yana ike mgbanye ikeji 2, ihe onwunwe nke ejiri eji eme ihe eji eme ihe na ogwe abuo 3, ibu dị mfe, na ọkpụrụkpụ 4, nguzo siri ike na iguzogide ihe; oyi, okpomọkụ...
Uru ： (1) Ngwa anyị niile dị ọcha 100%. Yabụ na anyị ga-ekwe nkwa nke ịdị mma. (2) Ichekwa ego na oge (3) teknụzụ dị elu na akụrụngwa (4) Echiche mara mma maka ichekwa ngwongwo na mmiri, nchara na unyi (5) ihe ndị gbasara akụ na ụba nke ịhazi na...
Ihe mkpuchi na-acha aja aja na-acha uhie uhie eji eme ihe nkiri Akara eji agbasa agbatị dị aja ọfụma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe obibi ọ bụla ma ọ bụ ebe ọrụ, ihe mkpuchi rọba abụghị ihe nrapado dị ka ma ọ bụ ihu dị ka teepu ma ọ bụ eriri....
Ngwa ahia ohuru k’etinye aka n’isi Uru: (1) Ngwa anyị niile dị ọcha 100%. Yabụ na anyị ga-ekwe nkwa nke ịdị mma. (2) Ichekwa ego na oge (3) teknụzụ dị elu na akụrụngwa (4) Echiche mara mma maka ichekwa ngwongwo na mmiri, nchara na unyi (5) ihe akụ...
Obere ihe nkiri a na-ete anwụ Anyị dị mkpa ihe site na Exxonmobile, a na-agbakwunye metallocene iji na-ekwe nkwa ịgbatịkwu dị elu ma na-ewusi iguzogide akwa. Item Width Thickness Net Weight Elongation Pull force Resistance Hand use stretch film 40...
China Ihe nkiri Bundling Ngwa
Bundling Film bu Baby roll Stretch Film, nke bu ihe kacha mma n’ise ma oburu n’ile n’ile na-elele ngwa ma obu choo ezigbo elu. Ihe ngosi a bu ihe omume di elu, ihe nkedo a na –eme ka ihe eji eme ya. Ike a gbalitere na njirimara agbatị pụtara iji obere ihe nkiri eji eme ihe mgbe ị na-enye ibu kachasị na ibu dị obere.
Ihe eji eme ihe nkedo nke igwe
Agba belt plastic eyi mbukota eriri
Free Sample Clear Bopp Mezie Roll
Kpochapụ ihe nkiri plastik gbakwunyere maka ịkwaga
Aka & Igwe eji agba ihe nkiri
Ahịa Mbipụta BOPP kwakọbara ya na LOGO
Ngwakọta mkpuchi akara agba dị elu dị elu
Ihe eji eme ihe eji eme ihe eji agba oyuyo ahihia
Polypropylene na - etinye ihe eji agbanye eriri
Pee Aka pallet Kechie Roll
Mkpịsị eriri akpa rọba na pallet
Ngwongwo Bundling kechie ofe aka nkpa aka mpịakọta ihe nkiri Firewood Bundling
Ekwentị mkpanaka: +8618025199553
Adreesị: No.230 Liuhuaxi Street, Xiakou, Dong Cheng, Dongguan, Guangdong
Copyright © 2021 Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. Ikike niile echekwala.